Food – Page3– Healthy Life Journal
သင့်ကိုယ်တွင်းအဆီ လောင်ကျွမ်းအောင် ကူညီပေးမယ့်အစာ ၉ မျိုး
စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကိုယ်တွင်းအဆီတွေ လောင်ကျွမ်းအောင် ကူညီပေးမယ့် အစားအစာတွေ ရှိပါတယ်။ ဝိတ်လျှော့နေသူ၊ ဝိတ်လျှော့ချင်သူ၊ ဝိတ်ထိန်းချင်သူတွေအတွက် အထူးသင့်တော်တဲ့ အစာတွေပါပဲ။ ကြက်သွန်ဖြူ ကြက်သွန်ဖြူမှာ အယ်လီစင်ဒြပ်ပေါင်းပါတဲ့အတွက် သွေးတွင်းအဆီနဲ့ မကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရောအဆင့်ကို လျော့ကျစေပါတယ်။ ဟင်းနုနယ်ရွက် ဟင်းနုနယ်ရွက်မှာ ဖောလစ်အက်စစ်၊...
ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့လိုလျှင် ခရမ်းချဉ်သီး များများစားပါ
စူး(ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျဖို့အတွက် စားသင့်တဲ့အစားအသောက်တွေကို သုတေသီတွေက လေ့လာဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာတော့ ထိထိရောက်ရောက် အသုံးဝင်တဲ့ အစားအသောက်ဆိုတာ ရှားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအစားအစာတွေထဲမှာ ခရမ်းချဉ်သီးကတော့ မပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။ ခရမ်းချဉ်သီး စားပေးတာက ကိုယ်ခန္ဓာသွယ်လျဖို့အတွက် တကယ်ကို ထိရောက်အသုံးဝင်ပါတယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။...
အိုမင်းမှုကို နှောင့်နှေးစေမည့် အစာ
စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) နံနက်စာ လိမ္မော်ရည် အကြမ်းပန်းကန်လုံးတစ်ခွက်၊ ကြက်ဥပြုတ်တစ်လုံး၊ ပေါင်မုန့်ညိုတစ်ချက်၊ ကော်ဖီ ဒါမှမဟုတ် လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက် နေ့လယ်စာ အဆီနည်းဒိန်ချဉ်တစ်ခွက်၊ ပန်းသီးတစ်လုံး၊ ထမင်းနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှစ်ခွက် ညစာ အရေခွံမပါတဲ့ ကြက်ရင်ပုံသား သုံးအောင်စ၊ စွပ်ပြုတ်ရည်တစ်ခွက်၊ အာလူးပြုတ်နဲ့ ဟင်းနုနယ်ရွက်ပြုတ်တစ်ခွက် သရေစာ...
မေး ။ အပ်မှိုရဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကို သိချင်ပါတယ်။ အပ်မှိုက ချက်လိုက်ရင် အချိန်ခဏလေးနဲ့ ကျက်ပါသလား။ ဟော့ပေါ့အိုးထဲ ထည့်ပြုတ်စားတာများလာလို့ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်နိုင်သလား သိချင်လို့ပါ။ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည် ။ ဖြေ ။ အခုခေတ်မှာ...
၁၀ တန်း စာမေးပွဲနီးချိန်မှာ ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေ စားပေးသင့်ပါသလဲ
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) Q. အခုလို ၁၀ တန်း စာမေးပွဲနီးချိန်မှာ ကလေးတွေ ကျန်းမာပြီးဉာဏ်ကောင်းနေအောင် ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေကို စားသင့်၊ ရှောင်သင့်ပါသလဲ။ နိုးနိုး (FB) A. ၁၀ တန်း စာမေးပွဲနီးချိန်မှာ များသောအားဖြင့် စိတ်ပူပင်မှုတွေ...
ဒိန်ချဉ်၏ အိမ်တွင်း အသုံးဝင်ပုံများ
မီးမိုးမေ ဒိန်ချဉ်မှာ အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားပါဝင်တာကြောင့် အစာခြေအူလမ်းကြောင်းစနစ်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ကောင်းစေတယ်ဆိုတာ သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဒါ့အပြင် ဒိန်ချဉ်ကို မျက်နှာပေါင်းတင်ရာမှာ၊ နေလောင်ဒဏ်ကုသရာမှာနဲ့ အိမ်မွေးခွေး၊ ကြောင်လေးတွေ အစာမကြေဖြစ်နေချိန်မှာလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မျက်နှာပေါင်းတင်နည်း မျက်နှာကြည်လင်တောက်ပစေဖို့ Spa သွားပြီး အကုန်အကျမခံနိုင်ရင်လည်း စိတ်မပူပါနဲ့။ ဒိန်ချဉ်နဲ့...
မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ရွှေဖရုံသီးမှာ ဗီတာမင်၊ သတ္တုဓာတ်၊ အမျှင်ဓာတ်နဲ့အင်တီအောက်ဆီးဒင့်တွေ အပြည့်ပါဝင်နေတယ်ဆိုတာ သင်သိပါရဲ့လား။ ရွှေဖရုံသီးကို ကျန်းမာရေးအတွက် စားသင့်သလားဆိုတာကို သိလိုကြသူတွေအတွက် ရွှေဖရုံသီးအကြောင်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိနိုင်စေဖို့ အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်ပါဝင်မှုများပါတယ် ရွှေဖရုံသီးမှာ တောက်ပတဲ့အရောင်ရှိလေလေ သင့်ကျန်းမာရေးအတွက်...
သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို အနာကျက်နှုန်းမြန်စေရန် ကူညီပေးမည့်အစားအသောက်များ
– ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး နာကျင်ကိုက်ခဲနေချိန်မှာ အနာကျက်အောင်ကူညီပေးမယ့် အစားအစာတွေကို စားပေးသင့်ပါတယ်။ (၁) အိုင်အိုဒင်းမှီဝဲပါ သိုင်းရွိုက်အဆင့် လျော့နည်းတာက ကိုယ်အလေးချိန်မြင့်တက်တာ၊ နှေးကွေးလေးလံတာနဲ့ ဒေါသထွက်လွယ်တာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အိုင်အိုဒင်းက သိုင်းရွိုက်ဂလင်းအတွက် မရှိမဖြစ်အရေးပါပါတယ်။ သိုင်းရွိုက်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာကောင်းစေရေးအတွက် ကယ်လ်စီယမ်၊...
နေ့စဉ် ဗီတာမင်ဒီ အလုံအလောက်ရရှိစေမည့် နည်းလမ်း ၁၂သွယ်
– ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ဗီတာမင်ဒီဟာ အရိုးကျန်းမာရေးအတွက် မရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့ ဗီတာမင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောလေ့လာမှုအရ ဗီတာမင်ဒီဟာ အအေးမိခြင်းမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်သလို စိတ်ဓာတ်ကျရောဂါကိုလည်း တွန်းလှန်ပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဗီတာမင်ဒီမှာ အလားတူ တခြားကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ သတင်းကောင်းတစ်ခုကတော့ လူအများစုက ဗီတာမင်ဒီကို...